Home Wararka (Deg Deg) Qarax weyn oo Muqdisho ka dhacay goor dhow
(Deg Deg) Qarax weyn oo Muqdisho ka dhacay goor dhow
Qarax weyn oo laga maqlay inta badan degmooyinka caasimadda ayaa goor dhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho.
Wararkii ugu horeeyay ee qaraxa ayaa sheegaya inuu ka dhacay jidka 21 October ee degmada Waaberi, agagaarka Afisyoone; waxaana lala sheegay in lala beegsaday Gaari halkaas marayey oo loo maleynayo inay la socdeen mas’uuliyiin.
Waxaa goobta xiray ciidamada Amniga iyadoo la joojiyey isu socodka dadka iyo gaadiidka, waxaana hadda bilowday gurmadka dadka ku waxyeeloobay.
Dib ayaan idiinkaga soo sheegi doonaa faahfaanta khasaaraha ka dhashay Qaraxa